Ku Jeclaaw Dadka Talyaani ah ee Difaaca Bulshada | Abuurista khadka tooska ah
Basalku ma noqon karaa cunsur khilaaf ku dhex jira xayeysiinta? ee Burker King Whopper maalmahan? Xariifnimadu shaki kuma jiro, laakiin miyey naxdin ku filan tahay in lagu muujiyo kala fogaanshaha bulshada?
Waxaan horay u aragnay soo jeedin kale, sida xarfahaas astaamaha, si loo muujiyo kala fogaansho bulsho oo lama huraan ah si looga hortago ballaarinta COVID-19. Waxaa jira qaar ka mid ah oo leh saameyn ka badan kuwa kale, laakiin waxaan la yaabanahay basasha dalkeena ama kuwa kale saameyn kuma yeelan karaan.
Qaybahan Isbaanishka ah, omelet Isbaanish ah oo leh basal ama aan lahayn waxay kudhowaad tahay dood qaran. Marka waan ogahay waxay naga fogaysaa sawirkaas fogeynta ah haddii aan u qaadanno hamburger, laakiin yaa u dhow oo aan dul dhigayn basasha duban oo gubatay dushiisa jeex jiis ah oo ku yaal gabal wanaagsan hilibka hamburger? (haa, waxoogaa hilib cunis ah ayaanu ku muujinaynay)
Si kastaba ha noqotee, Burker King Italia wuxuu soo saaray cusub 'Whopper' kaas oo leh saddex jibbaar ka badan inta caadiga ah. Haa waa run in fikirka laftiisu xariifnimo yahay, laakiin laga yaabee inay ku jirto xayeysiinta ama qaabeynta Way ka maqnaayeen taabashadaas si ay u soo saaraan saameyntaas; Waxaad horeyba u ogayd inaad yeelan karto fikrado xariif ah, laakiin markaa ma garanaysid sida loo fuliyo.
Fikradda ka dambaysa basasha ayaa ah in laga hortago dadka hareerahayaga ah, oo loo arko in qaar badan oo ka mid ah ay ku adag tahay inay u guuraan dhowr mitir sidii iyagoo haysta magnet markaan socod u baxno ama aan ku jirno supermarket, markii "ur" basasha. Laakiin haye, waa inaan cunno basal badan oo noocaas ah, si fiican, laga yaabee toonta haddii dadka kale ay vampires sidoo kale saameyn la mid ah yeeshaan ...
El fikradda waxaa hindisay hay'adda Wunderman Thompson waxaana lagu fuliyay makhaayadaha noocyada cuntooyinka degdegga ah. Hadaad ag joogtid ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Fikradda xariifka ah, ama maahan, ee Burger King oo leh 'Whopper' oo bulshada lagu fogeeyo
Tilmaanta "baashaalka" LEGO ee ka shaqaynta guriga oo kaa farxin doonta